20 ka mid ah maleeshiyaadka Xuutiyiinta oo lagu dilay koonfurta Ma’rib | Dayniile.com
Home Warkii 20 ka mid ah maleeshiyaadka Xuutiyiinta oo lagu dilay koonfurta Ma’rib
Dagaallo maanta ka dhacay jiidda koonfureed ee gobolka Ma’rib oo u dhexeeyay Ciidamada Yeman iyo maleeshiyaadka Xuutiyiinta, ayaa lagu warramayaa in halkaas lagu laayay tiro kamid ah Xuutiyiinta ka dagaalanta dalkaasi Yeman.
Ciidamada dowladda ee ku sugan koonfurta Ma’riib ayaa ka hortagay weerar ay maleeshiyadu ku soo qaadeen, iyagoo isku dayay in ay dib u soo ceshadaan fariisimo lagala wareegay saddexdii maalmood ee la soo dhaafay.
ilo -wareedyo deegaan ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay khasaare gaarsiiyeen maleeshiyaadkii soo duulay, ayna halkaas kaga carareen meydadka labaatan kamid ah Xuutiyiinta.
Madaxa hawlgalladda Milliteriga Yeman Sarreeye Gaas Naasir Al-Thibaani, ayaa sheegay in Ciiddanka Qalabka Sida, ay ku guuleysteen Hawlgalkii ay Xuutiyiinta kaga sifeynayeen gobalka Ma’rib , taasoo maleeshiyada khasaare loogu geystay.
Tan iyo bishii Febraayo ee la soo dhaafay, maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa xoojiyay weeraro ay ka wadeen gobolka Ma’rib ee qaniga ku ah saliidda, inkastoo maalmahii danbe ciidamada Dowlada ay kala wareegeen Xuutiyiinta goobahii ay horay u qabsadeen, iyagoo taageero ka helaya diyaaradaha isbaheysiga.
Previous articleWasiirka Caafimaadka iyo Duqa Muqdisho oo ka wada hadlay xaalada horumarinta adeegyada Caafimaadka Gobolka Banaadir
Next articleXildhibaan Fiqi: Yaa noo fasira cadaaladda AMISOM la marsiiyey ee NISA kari weysay?
Mid ka mid ah xorayntii ugu weyneyd ee dhibbaneyaal afduub lagu heystay ayaa ka dhacday waqootiga dalka Nigeri, kadib markii la soo badbaadiyay ugu...
Koox burcad ah jabsatay lana wareegtay website-ka wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha...
Nooca cusub ee xanuunka COVID-19 oo caalamka walaac ku abuuray